SPY299 - OMG Dummy Router Wi-Fi Security Camera, HD 1080P - Vahaolana OMG
Ny fahaizan'ny WiFi mijery lavitra mba handefasana horonantsary lavitra ny trano na ny orinasa
Fitaovana tonga lafatra ho an'ny fanaraha-maso miafina ho famantaranandro miasa
Mahazoa fampandrenesana fanosehana amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny fihetsika hita maso
Capabilites amin'ny fahitana amin'ny alina misy mazava 6M
Azo apetraka handraikitra amin'ny karatra microSD (tsy tafiditra, jereo ny kojakoja)
Ahitana mpandahateny amin'ny fandefasana feo amin'ny APP
Ny fakan-tsary dia manohana hatramin'ny fandraketana karatra SD 128GB miaraka amina fandraketana loop
Azo jerena amin'ny telefaona finday na alaina amin'ny solosaina ny rakitra video
Ity fakantsary mpitsikilo ity dia miasa ho toy ny famantaranandro nomerika feno Wi-Fi, fahitana amin'ny alina, HD 1080p ary ny fahitana ny fihetsiketsehana. Mahazoa fampandrenesana fanosehana amin'ny fotoana tena izy amin'ny fitaovana finday rehefa tsikaritra ny fihetsiketsehana. Ny fakan-tsary dia manohana karatra SD 128GB miaraka amin'ny fandraketana loop. Raketo ary tahirizo ny sary amin'ny karatra microSD, izay tsy maintsy vidiana misaraka. Tonga miaraka amina fiasan'ny mpandahateny 2-mpandefa handefa feo amin'ny APP. Io dia ahafahanao miresaka amin'ilay olona any ampita. Ny fahaiza-mahita amin'ny alina dia manana fahazavana 6M fahitana. Ireo rakitra video dia azo zahana anaty fampiharana amin'ny finday na alaina amin'ny solosaina. Aorian'ny fisintomana fampiharana dia azonao atao ny mijery lavitra mivantana ny horonantsary mivantana na mirakitra horonantsary sy sary amin'ny findainao.
Tsy manohana ny tambajotra 5G, na izany aza, ny router rehetra dia manana fikirakirana fifandraisana ambany (2G, 3G, ary 4G) izay miasa tsara amin'ity fakantsary ity.
lafiny : 14.9cm * 15cm * 4.4cm
Video Resolution: 1280 * 720, Max 15fps
Format voatifitra: MJPEG
Lahatsary miaraka amin'ny feo: Support
Mikrôma naorina: Support
Fitahirizana ivelany: Max 128GB
Hizaha ny anjely: 120 diplaoma
Fihetsika Motion: Tohano amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsary sy fanairana manosika